Inka Badan 30 Ka Tirsan Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Xerada Laanta Buura Lagu Dilay. – Calamada.com
Inka Badan 30 Ka Tirsan Maleeshiyaatka Dowlada Federaalka Oo Xerada Laanta Buura Lagu Dilay.
calamada July 11, 2016 2 min read
In ka bada 30 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay weeraro xoogleh oo xaley ciidamada Mujaahidiinta Jabhadda WI Sh/hoose ay ku qaadeen saldhig ku yaalla deegaanka Laanta-Buure ee duleedka degmada Afgooye, Iyadoona sidoo kale ay Mujaahidiintu soo ganiimeysteen gaadiid dagaal iyo kuwo nuuca raaxada ah.
Weerarkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ku bilowday qarax xoogan oo ka dhacay bartamaha saldhigga ka dibna ciidamada Mujaahidiinta ayaa ku daatay saldhigga cadowga si ay u dhameystiraan wixii ka bad-baaday qaraxa.
Dagaal kooban ka dib, Ciidamada Mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay saldhigga ka dib markii maleeshiyaadkii murtadiinta ee joogay xerada ay noqdeen kuwo ku halaagsamay weerarka iyo kuwo si dirqi ah ku baxsaday intii uu howlgalku socday.
Saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta ayaa noo xaqiijiyey in wax ka badan 30 ka tirsan murtadiinta lagu dilay weerarkaas, laguna gubay ilaa saddex gaari oo kala duwan. Waxaa suuragal ah in qasaaraha dhimasho ee cadowga uu intaas ka sii bato maadama faafaahinadu ay yihiin kuwo hordhac ah islamarkaana aanan weli la helin tira koobkii ugu dambeeyey.
Gaadiidka ganiimada ah ee ay Mujaahidiintu ku soo furteen dagaalkii xaley lagu qaaday saldhigga Murtadiinta ee Laanta-Buure ayaa gaaraya ilaa 7 gaari, waxaana ay kala yihiin saddex Cabdi-Bile oo nuuca dagaalka ah, Saddex gaari oo kuwa Raaxada ah iyo hal gaari oo Haartoob ah.
Maleeshiyaadkii murtadiinta ee ka bad-baaday weerarka ayaa firxadkooda waxa uu gaaray degmada Afgooye sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo kala duwan oo ay heshay Idaacada Islaamiga Andalus, Waxaana qaarkood ku jira dhaawacyo halis ah oo si dirqi ah kaga soo bad-baaday weerarka.
Deegaanka Laanta-Buure oo qiyaas ahaantii 40KM dhanka koonfur-galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa dhowrjeer martigeliyey weeraro noocan oo kale oo Mujaahidiintu ay ku beegsadeen Maleeshiyaadka Murtadiinta, Waxaana halkaas ku yaalla saldhig weyn oo murtadiintu ay ka difaacaan xarumahooda muhiimka ah ee Muqdisho iyo Afgooye, sidoo kalena laga soo abaabulo dhibaatooyinka iyo arbushaadda ay murtadiintu ka geystaan deegaanada Sh/hoose.
Bishii Maarso ee sanadkan ayey ahayd markii weerar xoogan oo midkan la mid ah ay Mujaahidiintu ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee Laanta-Buure xilligaas oo cadowga laga dilay ugu yaraan 73 askari, lagana soo ganiimeystay ilaa 9 gaari oo u badnaa gaadiidka dagaalka.
Previous: Dhageyso Warka Subax Ee Andalus 06-10-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Warka Duhur Ee Andalus 06-10-1437 Hijri.